Xinhua Myanmar - ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ၎င်းအား ရာထူးမှဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုကို“ ကြောင်းကျိုးမရှိသော မိုက်မဲမှု” ဟု ပြော
ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ၎င်းအား ရာထူးမှဖယ်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုကို“ ကြောင်းကျိုးမရှိသော မိုက်မဲမှု” ဟု ပြော
ထရမ့်	သမ္မတ	အမေရိကန်,
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁ ရက်တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ အိမ်ဖြူတော်မှ ထွက်လာသော အမေရိကန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)	North America
ဝါရှင်တန်၊ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်များက ၎င်းအား ရာထူးမှဖယ်ရှားရန် စတင်လှုပ်ရှားချိန်ကတည်းက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် အများပြည်သူရှေ့မှောက်ထွက်၍ ထိုသို့စွပ်စွဲပြစ်တင်ပြီး ရာထူးမှ ဖယ်ရှားရန် လုပ်ဆောင်မှုကို“ ကြောင်းကျိုးမရှိသောမိုက်မဲမှု” ဟု မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က ပြောကြားခဲ့သော ၎င်း၏မိန့်ခွန်းကိုရည်ညွှန်းလျက် ယင်းနေ့တွင် လွှတ်တော်အဆောက်အဦ(Capitol) ၌ အကြမ်းဖက်ဆူပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်များ၏ စွပ်စွဲမှုအပေါ် ထရမ့်က ယင်းမိန့်ခွန်းသည် “ သိပ်ကို သင့်မြတ်လျော်ကန်တယ်” ဟု တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတထရမ့်သည် တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ် Alamo ရှိ နယ်စပ်တံတိုင်းအား သွားရောက်စစ်ဆေးရန်အတွက် အိမ်ဖြူတော်မှ မထွက်ခွာမီ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားစဉ် အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရာထူးမှဖယ်ရှာရန် စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထရမ့်က “အဲဒီကိစ္စဟာ လုံးဝ ကြောင်းကျိုးမရှိတဲ့ မိုက်မဲမှုပဲ” ၊ အဲဒါက သိပ်ကို ဒေါသထွက်စရာကောင်းပါတယ် ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် သိပ်ကို အန္တရာယ်ကြီးမားလို့ပါပဲ” ဟု ထရမ့်က ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းအနေဖြင့် “အကြမ်းမဖက်မှု”ကို လိုလားကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဆူပူအုံကြွရန် အားပေးလှုံ့ဆော်မှု” စွပ်စွဲချက်ဖြင့် သမ္မတထရမ့်အား အရေးယူရန် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက် အမှတ် ၂၅ ကို အသုံးပြုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်များက ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်တွင် တရားဝင် ဆွေးနွေးမှုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထရမ့်အား ရာထူးမှဖယ်ရှားရေးအတွက် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက် အမှတ် ၂၅ ကို ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန့်အနေဖြင့် ကျင့်သုံးရန် ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်များက ဥပဒေအဆိုပြုချက်တစ်ခုကို ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နှောင်းပိုင်းတွင် လွှတ်တော်၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သွားရန်ရှိသည်။ အကယ်၍ ၂၄ နာရီအတွင်း မိုက်ပန့်က တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့လျှင် ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်အရ ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်များသည် သမ္မတအား ရာထူးမှဖယ်ရှားရေးစွပ်စွဲပြစ်တင်မှုပြုလုပ်ရန် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်တွန်းအားပေးဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
WASHINGTON, Jan. 12 (Xinhua) -- U.S. President Donald Trump on Tuesday spoke publicly for the first time since House Democrats moved to impeach him, calling the impeachment "ridiculous."
Referring to his speech on Jan.6that the Democrats said fomented the subsequent riot on the Capitol Hill on the same day, Trump said what he said in the speech was "totally appropriate."
The president was addressing reporters before departing for Alamo, Texas, to inspect the border wall.
On the impeachment, Trump said it's "absolutely ridiculous," and that it's "causing tremendous anger ... causing tremendous danger to our country." The president said he wanted "no violence."
The House will holdafloor vote later Tuesday onaDemocrats-proposed resolution calling on Vice President Mike Pence to invoke the 25th Amendment to remove Trump from office. If Pence doesn't respond within 24 hours, according to the resolution, the Democrats will push the impeachment proceedings ahead.
Photo caption - U.S. President Donald Trump leaves the White House in Washington D.C., on Aug. 1, 2019. (Photo by Ting Shen/Xinhua)
Previous Article YouTube က ထရမ့်၏ အကောင့်ကို အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကြာပိတ်ထားမည်
Next Article ထရမ့်က ဝါရှင်တန်မြို့တွင် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်အထိ သက်ရောက်မည့် အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာရန် အတည်ပြု